Uchwepheshe We-Semalt Utshela Konke Ngohlelo I-Themes Security Plugin
Amawebhusayithi ayengozini yokuhlaselwa amagciwane ngezindlela eziningi. Abasebenzisi abakha amawebhusayithi e-WordPress bangengozini yokuhlaselwa ngenxa yokukhetha okulinganiselwe okukhona ukuze bawavikele. Ngokusho kwe-Themes ukuphepha, amasayithi amasha angaphezu kwangu-30 000 aphelile aphethwe yilowo nalowo nsuku zonke. Isibonelo, abanye abasebenzisi banamaphasiwedi athakathaka angakwazi ukukhushulwa kalula ngama-keyloggers.
Ukuphepha kweWebhu kubalulekile ekuhloleni wonke umnikazi webhusayithi. Amakhasimende kanye nabafundi bangase babe nesisulu sokwakhiwa kwewebhusayithi, okwenza ibhizinisi lithole idumela elibi. Ukwenyuka kokuphepha kungcono utshalomali olungcono kunokubhekana nokulandela ukwephulwa kokuphepha. Abasebenzisi be-Themes abasebenzisi bezokuphepha ukuqinisa imininingwane yabo yomsebenzisi kanye nokuhlinzeka ngamaphakheji asebenzayo abasebenzisi abacebile abaza njengenguqulo yamahhala noma ye-premium.
U-Oliver King, isazi esihamba phambili esivela ku Semalt , unikeza lapha ukubuka ngokuningiliziwe kwe-Themes security plugin directory.
Ukuvikeleka kweThemes kubonakala njengeplagi ye-WordPress yokuphepha ephephile. IThemes inezici ezingaphezu kuka-30 ezingakusiza ekuvikeleni iwebhusayithi yakho ngokumelene nezinye izinsongo zokuphepha ezivamile. Ingxenye ebalulekile yalokhu ukuthi ukuphepha kweThemes kuzinikela kumakhasimende ayo ukuthola isilinganiso esingu-4.7 ku-5. Le plugin inezingcingo ezingaphezu kwezigidi ezingu-4. Ukuze uchaze ukuthi i-plugin i-Themes yokuphepha isebenza kanjani, singasebenzisa uhlelo lokushicilela samahhala bese ungena ngemvume kudeshibhodi yayo.
Uma ufaka i-plugin ye-Themes yokuphepha, uthola izinketho eziningana zokuphepha kwi-website yakho. Okukhethwa kokuqala kuvame ukuvikela iwebhusayithi yakho ngokusebenzisa amathebula we-Brute Force Network Protection ukuze uvikele iwebhusayithi yakho. Le nkinobho ye-popup iveza izinqumo eziningana ezifaka:
Backup Site Yakho
Lena imenyu ukukusiza ukwakha isipele sewebhusayithi yakho esimweni sayo samanje. Isipele singase sihlanganise yonke indawo, database kanye nezinhlobo ezahlukene zamafayela njengamafayela abezindaba. Ungakwazi ukubuyela njalo kulokhu okulondolozwayo nganoma yisiphi isikhathi uma kwenzeka into engalungile ekuqinisekiseni iwebhusayithi.
Vumela ukubuyekezwa kwamafayela
Lesi sici siguqula ukubuyekezwa kwefayela lakho le-wp-config.php ne-.htaccess.
Vimbela isayithi lakho
Lesi sici senza izilungiselelo ezizenzakalelayo kwiwebhusayithi ezihlukile kuma-plugin nezindikimba eziphikisanayo.
Lesi sici sivumela ukuphepha kweethemeshi ukuqoqa idatha engaziwa mayelana nezakhi ozisebenzisayo ukuthuthukisa izici ze-plugin zokuphepha ze-ithemes.
Kufanele uchofoze ngamunye wabo. Uma usuqedile, kufanele ukuthumele ngokuzenzakalelayo kudeshibhodi yakho.
Ideshibhodi: Ideshibhodi inezici eziningi zokuvikela ukukusiza ukuthi uhlale uphephile. Zihlanganisa Ungazikhipheli, uqalise, isimo sezokuphepha (Okungenziwa ku-Priority High, Priority Prior or Priority Priority).
Kukhona nezilungiselelo, izilungiselelo ezithuthukisiwe, izipele kanye nemenyu yokusiza.
I-plugin ye-Ithemes yokuvikeleka isilinganiso sokuphepha amawebhusayithi amaningi adinga ukukhula kahle. Kubalulekile ukukhumbula ukwenza isipele sesayithi lakho ngaphambi kokuzama ezinye zezici zayo. Lokhu kungenxa yokuthi i-plugin ye-Themes yokuphepha ingabangela imiphumela embi engosini njengendlela iwebhusayithi ephendula ngayo ezimweni ezahlukene. Ama-plugin wokuphepha ahlela ezinye izihlungi eziphambili ze-spam kanye nezici zokuvimbela ikheli le-IP. Ngenxa yalokho, i-plugin ye-Themes yokuphepha ingabhekwa ngokubalulekile kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress.